माओवादी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि षड्यन्त्र भइरहेको छ : महासचिव किरण – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
माओवादी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि षड्यन्त्र भइरहेको छ : महासचिव किरण
सन्दर्भ : शान्ति सम्झाैताकाे १४ बर्ष
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितेको छ । तर शान्ति प्रकृयाका महत्वपूर्ण काम अझै टुंगोमा पुग्न सकेको देखिदैन । यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
गणतन्त्र, नयाँ संविधान, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनजस्ता कामलाई उपलब्धिका रुपमा लिन सकिए पनि संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको काम अपेक्षाकृत ढंगले अघि नबढ्नुमा कसको कमजोरी हुनसक्छ ?
गलत ढंगले सम्झौता भयो भन्नुभयो । के के विषय गलत थिए त ?
शान्ति सम्झौतापछि केही उपलब्धि नै नभएका हुन् र ?
तत्कालीन माओवादी छिन्नभिन्न भए पनि त्यसको ठुलो हिस्सा अहिले सरकारकै नेतृत्वकर्ता बनेको छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ?
शान्ति प्रकृया टुंग्याउनकै लागि ढिलै भए पनि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन भए । तर दुवै आयोगले लामो समयसम्म पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसमा आयोगको कमजोरी हो वा राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप ?
तपाईंको विचारमा सरकारले यो प्रक्रिया अड्काएर राख्नुको रहस्य के हुनसक्छ त ?
तपाईंले शुरुमा गलत ढंगले सम्झौता गरियो भन्नुभयो, के माओवादीहरु गलत दिशाबाट शान्ति प्रकृयामा आएका हुन् भन्ने तपाईको बुझाइ हो ?
– शान्ति प्रकृया गरिएका बेला हामी जेलमा थियौँ । जुनबेला हामी छुट्यौँ, यी सब कुरा भइसकेका थिए । हामी आएपछि ‘गलत तरिकाले भयो है यो’ भनेर पार्टीभित्र त राख्यौँ तर साथीहरुले मान्नुभएन । हामी केही समय सँगसँगै पनि बस्यौँ, सच्चाएर जान सकिन्छ कि भनेर ।
त्यसबेला माओवादीका तर्फबाट सच्याउने केही कोसिस पनि भएको हो तर कहाँनेर कोसिस पुगेन भने त्यहाँ कानुनका ज्ञातासँग पनि कुरा भए । कुरा हुँदा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप गराउने कुरामा कानुनी प्रावधान मिलाइएन भन्ने नै तर्क आए । जुन आयोगहरु बने, उनीहरुको पनि पर्याप्त कानुन भएनन् भन्ने नै छ । अब माओवादीमाथिका मुद्दा मामिलाहरु सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउने भनेर भनिएको हो । तर नियमित प्रक्रिया जस्तै अदालतबाट टुंग्याउने कामहरु भइराखेको हो । अदालतबाट टुंग्याउने काम भयो भने त्यो प्रक्रियालाई पूरा गर्नका निम्ति सरकारमा बसेका सबै दल र सरकारमा गएका पूर्व माओवादी साथीहरुले गल्ती गरेको हो । यो अड्काउन नै चाहेको हो । त्यही भएर केही काम भएको छैन ।
नेपालको शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुग्न नदिन विदेशीहरुको चलखेल पनि भइरहेको छ भनिन्छ नि ?
(राताेपाटी डटकमका लागि फडिन्द्र नेपालले लिएकाे याे अन्तर्वार्ता सान्दर्भिक रहेकाेले यहाँ साभार गरिएकाे हाे । फरक शीर्षक हामीले दिएका हाैं । -स.)